တာဝန်ယူမှုရှိ သော ဂိမ်းကစားခြင်း
တာဝန်ယူမှုရှိသော ဂိမ်းကစားခြင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့ MMOnline365 တွင်ကစားသည့် ကစားသမားတိုင်းကို ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုခုရစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ကစားသူတွေကို MMOnline365 မှ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု ဖော်ပြခိုင်းထားပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြင့် ကစားသူတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကန့်သတ်ပမာဏကို ကူညီသတ်မှတ်ကာ ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ လောင်းကစားခြင်းသည် ဖျော်ဖြေရေးအသွင်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ဘဝအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခု မဖြစ်သင့်ပါ။ ငွေချေးငှားပြီးကစားခြင်း၊ သင့်ရဲ့ဝင်ငွေစာရင်းထက် ပိုမိုသုံးစွဲခြင်း၊ အခြားတစ်နေရာတွင် အသုံးပြုရန် ခွဲဝေထားသည့် ငွေများကို လောင်းကစားရန် အသုံးပြုခြင်းသည် အမြော်အမြင်မရှိခြင်းဖြစ်ရုံသာမက သင်နှင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်ရန် ဦးတည်လာစေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ MMOnline365 မှာ ကစားနေစဉ် သင့်ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရှိနေစေလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် တာဝန်သိစွာ လောင်းကစားပြီး ပျော်ရွှင်လိုက်ပါ!
အကူအညီ အထောက်အပံ့ ရယူခြင်း
လောင်းကစားခြင်းကြောင့် ပြဿနာဖြစ်ပေါ်နေသည့် လူတိုင်းကို အကူအညီအထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော ကစားသူများကိုလည်း ထိရောက်စွာ ကူညီနိုင်စေရန် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အဖွဲ့အစည်းများကိုဆက်သွယ်ပေးကြရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ ဝဘ်ဆိုက်များမှ အကြံညဏ်နှင့် လမ်းညွှန်မှုတို့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုက်တိုင်းတွင် အကူအညီပေးမည့် နံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ ဖော်ပြထားပြီး အကြံညဏ်နှင့် အထောက်အပံ့ရယူရန် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာ လောင်းကစားပြဿနာ ရှိနေလား?
သင့်မှာ လောင်းကစားနှင့်ပတ်သတ်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ရှိနေသည်ဟု ခံစားမိပါက အောက်ပါမေးခွန်းများကို မိမိကိုယ်မိမိ ပြန်မေးကြည့်ပါ။
သင်လောင်းကစားခြင်းကြောင့် အခြားသူများ၏ အဆိုးမြင် အပြစ်ရှာခံနေရလား?
လောင်းကစားခြင်းအပေါ် သုံးစွဲခဲ့သည့် အချိန်ပမာဏ သို့မဟုတ် ငွေပမာဏတို့ကို ဖုံးကွယ်ထားရန် လိမ်ညာခဲ့ဖူးလား?
စကားများခြင်းများ၊ အနှောက်အယှက်များ၊ သို့မဟုတ် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းများက သင့်ကို လောင်းကစားလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာစေပါသလား?
အချိန်အပိုင်းအခြား တော်တော်ကြာသည်အထိ တစ်ယောက်တည်း သီးသန့်လောင်းကစားပါသလား?
လောင်းကစားရန် အလုပ်၊ ကျောင်းများနှင့် အလှမ်းဝေးကွာနေပါသလား?
ပျင်းရိခြင်း သို့မဟုတ် ပျော်ရွှင်မှုမရှိသော ဘဝမှ လွတ်မြောက်ရန် လောင်းကစားခြင်းဖြစ်ပါသလား?
လောင်းကစားငွေကို အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုရန် တွန့်ဆုတ်နေပါသလား?
သင့်ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် လောင်းကစားကြောင့် စိတ်ဝင်စားမှု ပျောက်ဆုံးနေလား?
သင် လောင်းကစားရှုံးနေလျှင် သင့်အရှုံးများအတွက် ဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန် ပြန်လည် အနိုင်ရရန် ကျိုးစားရမယ် စသည့် ခံစားချက်မျိုး ခံစားရပါသလား?
လောင်းကစားနေစဉ် ငွေကုန်သွားသောအခါ စိတ်သောကရောက်ပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန် ပြန်လည်လောင်းကစားရန် လိုအပ်သည်ဟု ခံစားရပါသလား?
တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မကျန်သည်အထိ လောင်းကစားပါသလား?
လောင်းကစားအကြွေးများပေးရန် သို့မဟုတ် လောင်းကစားရန်အတွက် လိုအပ်သည့်ငွေရရှိရန် လိမ်ညာဖူးသလား? ချေးငှားဖူး သို့မဟုတ် ခိုးယူဖူးသလား?
သင့်ရဲ့ လောင်းကစားကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင်လိုသည်အထိ ခံစားမိပါသလား?
သင့်ရဲ့အဖြေမှာ “ Yes” များ တော်တော်များများ ပါရှိနေလျင် သင့်ထံတွင် အရေးကြီးသည့်လောင်းကစားပြဿနာ ရှိနေပြီးဟု ယူဆနိုင်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် လိပ်စာတို့မှ အကူအညီနှင့် အကြံညဏ်တို့ တောင်းယူသင့်နေပါပြီ။
သင့်ရဲ့ ကစားအားကို ထိန်းချုပ်ခြင်း
သူတို့ရဲ့ ဝင်ငွေခွဲတမ်းထက် ကျော်လွန်အသုံးပြုခြင်းဟာ လောင်းကစားကို မကြာခဏဆော့ကစားသူတို့အတွက်တော့ အထူးတစ်လည် လုပ်ရပ်များ မဟုတ်ပါ။ သို့ပေမဲ့ တိကျပြီး မိမိတတ်နိုင်သည့် ပမာဏတစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး လောင်းကစားခြင်းသည်သာလျင် သင်ရဲ့ ကုန်ကျစာရိတ်သက်သာစေမည့်နည်းလမ်းဟု ကျွန်ုပ်တို့ အကြုံပြုပါတယ်။
သင့်ရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် အသုံးစားရိတ်များကို ကန့်သတ်ခြင်း
သင့်ရဲ့ ဂိမ်းကစားခြင်းကို ကူညီကန့်သတ်ပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ MMOnline365 မှာ ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့သွင်းငွေကို အကန့်အသတ်တစ်ခုထားရှိနိုင်ပြီး ထိုအကန့်အသတ်မှ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် လစဉ် သတ်မှတ်ထားနိုင်ပြီး သင်သတ်မှတ်ထားသည့် အရှုံးပမာဏရောက်သည့်အခါတွင် သင့်ကို သတိပေးပါလိမ့်မည်။ သတ်မှတ်ချက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ရှိလေ ထိထိရောက်ရာက်ရှိလေ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကို သတ်မှတ်လိုပါက ကျွနု်ပ်တို့ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ထံတွင် လောင်းကစားပြဿနာရှိနေပြီဟု ယုံကြည်နေလျှင် သို့မဟုတ် လောင်းကစားခြင်းရပ်တန့်ရန် ခိုင်မာသော ဆန္ဒရှိလျှင် သင့်အား ရာသက်ပန် MMOnline365 တွင် ကစားခြင်းကို ဖယ်ထုတ်ပေးပါမည်။ သင်ကိုယ်တိုင်မှ ရာသက်ပန် ရပ်တန့်လိုလျှင် MMOnline365 တွင် ဂိမ်းကစားခြင်းများကို တားမြစ်ပေးပါမည်။ သင်လုပ်ပေးစရာဆိုလို့ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းကို ဆက်သွယ်ပေးရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
အင်တာနက်မှ ဂိမ်းဆိုက်များ၊ လောင်းကစားဆိုင်များကို ဝန်ရောက်မိခြင်းအား တားမြစ်ပေးနိုင်သည့် အထောက်အပံ့များ မျိုးစုံစွာ ရှိပြီး Gamblock™ www.gamblock.com ဆိုက်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အင်တာနက် လောင်းကစားဂိမ်းဆိုက်များကို ဝင်ရောက်ခြင်းအား ပိတ်ပင်ပေးပါသည်။ ၎င်းဆိုက်သည် စည်းကမ်းမရှိသော အန္တရာယ်များသည့် လောင်းကစားများကို လောင်းကစားသူတို့ အတွက် ဖယ်ရှားပိတ်ပင်ပေးပါသည်။
အသက်မပြည့်ပဲ လောင်းကစားခြင်းကို တားဆီးခြင်း
MMOnline365 တွင် ကစားမည်ဆိုလျှင် အနည်းဆုံး အသက် (၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီး ဖြစ်ရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂိမ်းဆိုက်တွင် အသက်မပြည့်သူများ ကစားနေခြင်း မဖြစ်ရလေအောင် အမြဲ ဂရုတစိုက် စစ်ဆေးပါသည်။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်များ ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ကစားနေသူသည် ၎င်း၏အသက်ကို လိမ်ညာထားခြင်းကို သိရှိပါက ဒဏ်ကြေးအနေဖြင့် သင့်အနိုင်များမှ ပေးဆောင်ရပါမည် သို့မဟုတ် ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု သတ်မှတ်ပါမည်။
မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်မလာစေရန် ကစားသူတိုင်း အင်တာနက်ခွဲခြမ်း စီစစ်သည့် ဆော့ဝဲများကို မိမိကွန်ပြူတာအတွင်း ထည့်သွင်းထားသင့်သည်ဟု အကြံပြုပါသည်။ ထိုသို့သော အက်ပလီကေးရှင်းများစွာ ရှိပြီး ၎င်းတို့မှတစ်ဆင့် ကွန်ပြူတာမှ ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ရန် တားမြစ်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါတို့လည်း အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။